Ezona zibane ze-aquarium ezilungileyo Ngeentlanzi
Ukukhanyisa kwi-aquarium kudlala indima ebalulekileyo kubomi beentlanzi zethu. Ukufumana ukukhanya komgangatho, kungcono ukusebenzisa ii-LED. Nangona kunjalo, xa siza kufumana ukukhanya kwethu kwi-aquarium siza namawaka emibuzo malunga nayo. Sesiphi isibane esifanelekileyo? Zeziphi iintlobo zezibane ze-aquarium ezikhoyo? Singayilayita njani itanki yeentlanzi? Phakathi kwezinye.
Ukwenza oku, namhlanje siza kuthetha ngeyona nto intle Izibane ze-aquarium eziziqhelanisa nawe.
1 Esona sibane siphezulu se-aquarium
1.1 I-LED yeNicrew
1.2 Isibonelelo A360WE
1.3 UFluval Fresh & Plant
1.4 I-Orbit yangoku ye-USA
2 Ukuqwalaselwa malunga nezibane ze-aquarium
3 Iimpawu ekufuneka zikhanyisiwe kwi-aquarium
4 Itekhnoloji yokukhanyisa isibane se-Aquarium
Ukukhanya kweLed Aquarium ye-Aquarium, ...
Isibane se-JBL se-LED siphezulu...
YeenGreen Light Aquarium...
Le modeli inobukhulu obuhlanu kwaye iyahlengahlengiswa phakathi kwe-30 kunye ne-136 cm. Inokusetyenziswa kwamandla phakathi kwe-6 kunye ne-32 W. Iineendlela ezimbini ezikhanyayo: emhlophe naluhlaza okwesibhakabhaka. Isetyenziselwa amanzi amatsha kunye namanzi anetyuwa kwaye kuyacetyiswa kwezo zityalo zendalo ezinenqanaba eliphantsi lokukhanya kwiimfuno zazo. Inokusetyenziswa okuphantsi kuba inetekhnoloji ye-LED. cofa apha ukuthenga esi sibane.
Ngokusetyenziswa kwe-90W, le modeli inamandla okulungelelaniswa kunye nokunyanga okubonakalayo. Zikhanya nge-15% kunezinye iintlobo zezibane. Ikwanayo netekhnoloji ye-LED, iyahambelana nabaqhubi bangaphandle. Inokuba nezibane ezininzi kumtya. Kucetyiswa ngakumbi kwezo ndawo zasemanzini ezinezityalo kunye namanzi amatsha. Ingasetyenziselwa ezo zityalo zinqanaba eliphakathi neliphezulu lokufuna ukukhanya kwiimfuno zazo. Uyabona ukuba ziya kuba kukucofa apha.
UFluval Fresh & Plant
I-Fluval Led Fresh kunye neZityalo ...
Ukusetyenziswa kweColon phakathi kwama-32 nama-59 W, esi sibane sinobukhulu obuyi-61-153 cm. Ilungele ezo ndawo zasemanzini ezinezityalo zokwenene kunye namanzi amatsha. Inokuba ne-engile esasazekayo ye-120 degrees. Inobomi beeyure ezingama-50.000 XNUMX, ke iyasebenza. Isetyenziselwa ezo zityalo zinqanaba eliphakathi neliphezulu lokukhanya kwiimfuno zazo. Inika itekhnoloji ye-LED kuyo yonke indawo ebonakalayo. Ukuba ufuna ukuthenga esi sibane cofa apha.
I-Orbit yangoku ye-USA
Le modeli inamandla e-18 W. Inolawulo lwe-infrared engenazingcingo kunye ne-chip ephezulu ye-LED chip. I-angle yokusasaza ukukhanya inokufikelela kwi-degrees ezingama-120.
Ukuqwalaselwa malunga nezibane ze-aquarium
Xa siqala i-aquarium entsha, kungcono ukuqala ixesha lokufota malunga neeyure ezingama-6 ngenyanga yokuqala. Nje ukuba iintlanzi ziqhelane nesityalo, singonyuka ukuya kwiiyure ezisi-8 zokukhanya kwezi nyanga zilandelayo. Xa iinyanga ezi-2 ukuya kwezi-3 sele zidlulile singalandisa ixesha lokufota phakathi kwe-10 kunye neeyure ezili-12 ngokuxhomekeke kubuninzi betanki ngalinye.
Ezi ngcebiso zibanzi kodwa zinokunceda ukuphucula ukukhula kokusebenza kwezityalo kunye nentlanzi. Ngohlobo ngalunye lwe-aquarium, uhlobo lwamanzi, iintlobo zeentlanzi onazo kunye nezityalo, kuya kufuneka uyazi iinkcukacha ukuze ufumane ukukhanya okuyimfuneko.
Njengoko ubona, ukukhanya ngaphakathi kwetanki yentlanzi kubalulekile. Ndiyathemba ukuba ngezi ngcebiso unokukhetha phakathi kwezona zibane zibalaseleyo ze-aquarium.
Iimpawu ekufuneka zikhanyisiwe kwi-aquarium
Izibane zizixhobo eziyimfuneko ukuze zikwazi ukubonelela ngendlela elawulwayo ukukhanya ngaphakathi kwetanki yentlanzi. Kwi-aquarium kufuneka siphinde senze iimeko ezifanayo nezo zinentlanzi kwindalo yazo. Ke ngoko, ezinye izinto ziyafuneka ukuphinda zenze ezi meko ngendlela esempilweni kunye nokugcina ulungelelwaniso.
Xa abantu abaninzi beqala kwihlabathi lee-aquariums bahlala benza impazamo yokujongela phantsi indima yokukhanya. Ukufumana ukukhanya okuchanekileyo kubalulekile ukuba sifuna ukuqinisekisa ezona meko zibalaseleyo kwiintlanzi zethu. Ukongeza, ubuhle bomfanekiso we-aquarium ngokupheleleyo. Namhlanje, Izibane ze-aquarium zinobuchwepheshe obukhulu njengokukhanya kwe-LED ukwenza ukusetyenziswa kombane kusezantsi kakhulu.
I-aquarium nganye yahlukile kwaye ukukhanya kwazo nganye yazo kuxhomekeke kwindalo esiyiphilayo kunye neempawu zayo. Ezinye zezinto ekufuneka sizithathele ingqalelo zezi: ubungakanani be-aquarium, iintlobo zentlanzi, inyani yokuba nezityalo zendalo okanye ezingezizo kunye ne-aesthetics ngokubanzi. Izibane kufuneka zibe nobungakanani ngokwetanki ukuphinda kukhanye ukukhanya okuyimfuneko kwindalo. Ukuba sisebenzisa ukukhanya kwendalo kwi-aquarium yethu asinakukuyeka ukukhula kwe-arias. Ke ngoko kuyacetyiswa ukuba kusetyenziswe ukukhanya okungekuko.
Kufuneka kubonelelwe ngesingqisho sebhayoloji ixesha lokukhanya nobumnyama phakathi kwe-8 kunye neeyure ezili-12. Ukuba zikhanyisa ngakumbi, ekuphela kwento esiya kuyenza kukuchitha amandla amaninzi. Ukuba sinezityalo zendalo kufuneka sonyuse ukukhanya kancinci kuba kuyakudinga oko.
Itekhnoloji yokukhanyisa isibane se-Aquarium
Amanqaku aphambili ekuye kwanyanzeleka ukuba akhanyise iitanki zentlanzi ibe yimibhobho ye-fluorescent. Oku kungenxa yexabiso lezoqoqosho, iindidi kunye nesivuno esikhulu ngexesha laso. Ngombulelo kwitekhnoloji, ubungakanani bamathuba ezibane zeetanki zentlanzi sele zandisiwe. Izibane ze-Aquarium ngoku zi-halogen kunye nohlobo lomphunga. Okwangoku, ezona zisebenza kakuhle zezo zinobuchwephesha be-LED. Zizo eziqhubela phambili ngesantya esingenakuthintelwa kwaye ezo zimele izibane ezilungelelanisiweyo nezisebenza kakuhle kwiitanki zentlanzi.
Ukulinganisa ukusebenza kwezibane ze-aquarium ukuba basebenzisa izinto ezithile ezinje:
Isixa sokukhanya esikhutshwa ngumthombo wokukhanya.
Umgangatho wesibane sokukhanya.
Ubude kunye nomjikelo wobomi wesibane.
Asinakubeka isibane naphina kwindawo yesithathu. Kuya kufuneka kunqumle amandla okukhanya ayimfuneko ukuze izityalo ze-aquarium zikhule kakuhle. Ukongeza, imeko yokukhanyisa ineempawu ezifanelekileyo ekubonakalweni kokugqibela kwe-aquarium. Ngale ndlela, ukuba sibeka ukukhanya ngokuchanekileyo, umbonisi uya kuba nakho ukuyiqonda eyona milo ilungileyo kuyo yonke imibala yentlanzi nezityalo.
Ukukhanya ngaphambili, ukukhanya kwe-aquarium kuya kukhanya kwintlanzi nakwizityalo ezivela ngaphambili. Yile ndlela umntu obukeleyo anokulubona ngcono ngayo uluhlu lwemibala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi olwandle » Esona sibane siphezulu se-aquarium